War-murtiyeedka shirka Golaha Qurbajoogta Soomaaliyeed (GSDIC) 2016 – WARSOOR
Muqdisho – (warsoor) – Golaha Qurbajoogta Soomaaliyeed ayaa ku qabtay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho shir caalami ah 13 – 15 ka August 2016.
Shirka ayaa ka dhacay Huteelka Jazeera, waxaana ka soo qeybgalay xubno door muhiim ah ku dhex leh bulshadda Soomaaliyeed ee Qurbajoogta iyo kuwa dalka gudahiisa ku nool. Xubno ka socday dowladda, iyo shirkaddaha ganacsiga gaarka loo leeyahay ayaa iguna ka soo qeyb-galay.
Shirka ayaa looga hadlay mawduucyo badan oo kala duwan, waxaana ka hadlay bahwadaagta Qurbajoogta. Shirka ayaa waxaa furay Mudane, Dr. Abdusaalam Hadliye Cumar, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, wasiirka Qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah, Abdiraxmaan caynte iyo ergeyga gaar ah ee xoghaya Qaramada midoobay ee Soomaaliya, Micheal Keating, waxaana soo xiray Madaxweynaha DFS Mudane Xasan Sheekh Maxamuud.
Shirka ayaa waxaa hadalo waxtar leh ka jeediyay howladeeno sar sare oo ka tirsan hey’addaha dowliga ah kuwa an dowliga aheyn iyo xubno ka tirsan Qurbajoogta oo labadaba la shaqeeya kuwaas oo khibradahooda dhanka horumarinta, nabadda iyo dib u heshisiinta la wadaagay ergadda shirka.
Kaddib markii la wadaagay afkaaro iyo aqoon isweydaarsi ku saabsan mawduucyo badan waxaan:
Boogaadin: Waxaa GSD lagu bogaadinayaa ku qabashadda shirkan tariikhiga ah ee guusha ku soo dhamaaday laguna qabtay Muqdisho, Soomaaliya
Waxan qiraynaa: Dadaalka iyo juhdiga dhammaan xubnaha ka soo qeybgalay shirkan, ee suurtagaliyey inuu guul ku dhamaado, oo ay ku jiraan shirkaddaha tageeray shirka oo ay ka mid yihiin kuwa gudaha iyo dibadda.
Waxaan soo dhaweynaynaa: Wadatashiga iyo go’aamadda faa’iidadda leh ee ka soo baxay shirka ee ku saabsanaa qeybo badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin, xawaaladaha, maalgashiga qurbajoogta ee dalka, tayeynta doorka qurbajoogta dalalka ay ku noolyihiin, horumarinta sawirka Qurbajoogta Soomaaliyeed, luuqadda iyo dhaqanka.
Gubaabin: Waxaan ku gubaabinaynaa dhammaan ka soo qeybgalayaasha iyo bahwadaagta kale inay fuliyaan himilooyinka la hiigsanayo, ayna sii wadaan dhisidda iyo isku xirkooda si loo gaaro iskaashi horumarsan.
Talo soo jeedin: Waxan talo ku soo jeedinayaa in la joogteeyo kulamadda si loo fuliyo natiijoyinka ka soo baxay shirka gudaha dalka iyo dibaddaba.
Waxan ku cel-celinaynaa: Muhiimiyadda ay leedahay dardargalinta wadahadalka iyo wax-wada qabsiga Qurbajoogta iyo walaalaha Soomaaliyeed ee gudaha dalka ku nool si loo gaaro horumar qaran oo la taaban karo.
Waxan bogaadineynaa dadaalka Qurbajoogta ee u qidmeynta qoysaskooda iyo bulshadda.
Waxan Qiraynaa: Muhiimiyadda xawaaladaha ee horumarinta Soomaaliya.
Waxan hoosta iskala xariiqaynaa: Kaalinta lagama maarmaanka ah ee qeybta Xawaaladaha Soomaaliyeed ay ka qataan isku xirka qoysaskooda Soomaaliyeed iyo hore u dhaqaajinta iyo dib-u-dhiska dhaqaalaha Soomaaliya.
Waxan talo ku soo jedinaynaa: In Cilmi baaris dheeri ah lagu sameeyo dib-u-habeynta xawaaladaha, si looga dhigo dhaqaajyayaasha agabka maalgashiga bulshadda iyo horumarinta.
Waxan ku bogaadinaynaa bulshadda ganacsatadda Soomaaliyeed, kuwaas oo tageero nagu siiyay qabsoomidda shirka.
Waxan Qiraynaa: Dadaaladda iyo juhdiga bulshadda ganacsatadda kala duwan, kuwaas oo adeegyo lagama marmaan ah siiya dadka Soomaaliyeed, xiliyadii la soo dhaafay ee ugu adkaa iyo haddaba.
Waxan qiraynaa: Muhiimiyadda maalgashiga qurbajoogta Soomaaliyeed ee hadda iyo mustaqbalkaba ee horumarinta ummada Soomaaliyeed iyo Soomaaliya.
Waxan bogadinaynaa: Qurbajoogta Soomaaliyeed ee dib ugu soo laabtay dalka si ay u maalgashtaan, gaar ahaan adeegyadda bulsho ee aadka loogu baahan yahay ee ay ka midka yihiin, waxabarashadda iyo caafimaadka.
Waxan hoosta iska xariiqnay: Dadaaladda la taaban karo ee dowladda federaalka Soomaaliya ee ku saabsan dhiirigalinta maalgashiga dalkeena.
Waxan ku cel-celinaynaa: Muhiimiyadda ay leedahay isku-xidhka fursadaha maalgashiga ee Soomaaliya ee ka dhaxeysa Soomaalidda iyo dadyowga kale ee wada shaqeyntu kala dhaxeysa ee caalamka oo dhan. Iyadoo midaas la amba qaadayo, waxan u hambalyeynaynaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo dhiirigalinta maalgashiga Soomaaliya suurtagalinta SomInvest Portal, oo ah meel laga heli karo warbixinada maalgashiga dalka ku saaabsan.
Waxan talo ku soo jeedinaynaa: Dowladda federaalka Soomaaliya inay dardargaliso suurtaglinta helidda warxbino, tallo iyo fursado si loola macaalimo hey’adaha dowliga ah ee arrimaha fursadaha maalgashiga, sharciyadda iyo siyaasadaha dowladda si ay uga faa’ideystaan maalgaliyaayasha maanta iyo kuwa mustaqbalka.
Waxan ku guubaabineynaa: In Qurbajoogta Soomaaliyeed ay sahmiyaan fursadaha ganacsi ee dalka ka jira. Iyo inay dhaqaale galiyaan fikraddaha cusub ee wax-soo-saarka si keli-keli ah ama si wadajir ah.
Waxaan ku guubaabinaynaa: Maalgashiga oo idil inuu keeno shaqo abuur iyo fursado ay ka faa’iideystaan, qurbajoogta iyo walalahooda dalka gudahiisa.
Waxan tallo ku soo jeedinaynaa: In aqoonta la isweydaarso, xirfadaha dalka loo soo celiyo, iyo wadatashiga ee laamaha ganasiga gaarka ah iyo midka dowliga ah gudaha dalka iyo dibadda Waxan sidoo kale soo jedinaynaa wada shaqeyn sal-adag leh inayn muhiim u tahay horumar iyo maalgashi waara oo dalku yeesho.
Waxan bogaadinaynaa DFS, shacabka Soomaaliyeed ee hal-abuurka gigsiga leh iyo bahwadaagta kale ee caalamka, dadaalkooda ku wajahan dib u dhiska dalkeena.
Waxan qiraynaa: Muhiimiyada iyo mas’uuliyadda gaarsiinta horumarka Soomaaliya dhammaan xiriiradda kale ee dalka iyo dibadda.
Dib u xoojin: Waxan dib u xoojinaynaa dadaaladeena ku saleysan inaan tusaale wanaagsan noqono, kuwaas oo ku saleysan inaan soo booqano dalkeena isla markaasna aan maalgashano, si aan meesha uga saarno fikiradda iyo fasiraadda qaldan.
Waxaan tallo ku soo jeedinaynaa: Istraatiijiyad dhameystiran in la sameeyo isla markaasna la fuliyo si dib loogu naqshadeeyo Soomaaliya.
Waxaan u baahanahay innaan noqono kuwa la yimaada, isla markaasna aan hogaamino isbedelka aan doneyno inaan ka aragno dalkeena.
Waxaan isku raacnay: In sida kelliya ee lagu gaari karo hiigsigan ay tahay wada shaqeyn iyo inagoo dardar galinayna inaan noqono muwadaniin wax-tar leh oo muuqda.
Waxan ku boorinaynaa: Iskaashi wax-tar leh iyo wada shaqeyn ay yeshaan Qurbajoogta iyo walaalaha Soomaaliyeed ee dalka gudahiisa.
Waxaan isla qaadeynaa: Innaan wada shaqeyno dhammaan arrimaha na quseeya, meel kasta oo aan joogno si aynu waxtar iyo wax ku biiran waarta oo taabagal ah uga sameyno dalkeena Soomaaliya.